« Raharaha pasitera Rasendrahasina Lala » : hangataka fihaonana amin’ny filoham-pirenena ny FJKM | NewsMada
« Raharaha pasitera Rasendrahasina Lala » : hangataka fihaonana amin’ny filoham-pirenena ny FJKM
Hiaka-dapa ny lohandohan’ny mpisorona. « Tsy hitory ny FJKM, fa hangataka fihaonana amin’ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina… Fantatra fa tao ambadiky ireny raharaha ireny ny olona ao an-dapa, eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika », hoy ny filoha lefitry ny FJKM, Ravalomanana Marc, nisolo tena ny birao foibe tetsy Ampandrana, omaly taorian’ny fivorian’izy ireo naharitra ora maromaro. Eo ny maha mpitondra fanjakana ny filoham-pirenena ka naha tafiditra ny olony amin’izao fanosoram-potaka izao. Fa eo koa ny maha mpino FJKM an-dRajaonarimampianina ka hitondrana izany eo aminy. Tombanana ho antony hampiakarana ny raharaha eny an-dapa avokoa izany.
Nambaran’ny birao foibe koa fa nilamina tanteraka ny resaka tao anatin’io fivoriana io ary harovana hatrany ny fiangonana. « Tsy nisy ny hadisoan’ny filohan’ny FJKM, ny pasitera Rasendrahasina Lala ary tsy misy koa ny sazy. Mijanona amin’ny toerany fa tsy hametra-pialana izy », hoy ihany izy ireo.
Misy finiavana te hanakorontana…
Nialoha izany, nahitsy ny nambaran’ny filoha lefitry ny FJKM fa tena manala baraka sy mahamenatra ireny fanosora-potaka ireny ka antony nangatahany ny hanaovana izao fivorian’ny birao foibe maika izao. Nomeny lesona mihitsy koa aza ny mpanao gazety ny amin’ny tokony hanamarinana ny vaovao havoaka na samy manana ny fomba fisainany aza. « Eo koa anefa ny finiavan’ny sasany hanakorontana. Tsy ho voakorontana izany anefa io », hoy izy.
Anisan’ny tsy mazava amin’ity raharaha ity ny nahatongavan’ireo mpitandro filaminana ara-potoana teo amin’io toerana nioran’ny pasitera Rasendrahasina Lala. Nirahin’iza ary inona no tiana hahatongavana ? Efa nilaza rahateo ny filohan’ny FJKM fa efa voaomana mialoha iny fanosoram-potaka sy fanalam-baraka azy iny.
Mazava ny an’ny FJKM fa fandotoana ity fiangonana ity avokoa ireny rehetra ireny.